June 2014 | ကမ်းလက်
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 6/30/2014 - No comments
လူတစ်ယောက်က သူ့ ညာဖက် လက်မောင်းနာနေလို့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြ ကြည့် မယ်ဆိုတော့ သူ့ သူငယ်ချင်းက အလကား ပိုက်ဆံကုန်အောင်ကွာ၊ ကွန်ပြူ တာစက်ကို "ဆီး" အစစ်ခိုင်းပြီး ရောဂါရှာလိုက်ရင် ဆယ်စက္ကန့်အတွင်း သိရ မယ်၊ ပြီးတော့ ဆယ်ဒေါ်လာပဲ ကုန်မယ် ဆိုလို့ စိတ်ဝင်တစား ဖြစ်မိ တာ နဲ့ ဆေးခန်းရှေ့ကကွန်ပြူတာစက်ဆီကို ရောက်သွားမိတယ်။ ရောက်ရောက်ချင်း ကွန်ပြူတာထဲ ဆယ်ဒေါ်လာထည့်လိုက်တော့ ကွန်ပြူတာက ဆီး ထည့်ဖို့ ပုလင်းထုတ်ပေးတယ်။ ဆီးတွေကို ကွန်ပြူတာနဲ့ ချိတ်ထားတဲ့ ခွက် ထဲလောင်းထည့်လိုက်ပြီး ဆယ်စက္ကန့် အကြာမှာ ကွန်ပြူတာက ဆေး အညွှန်းစာရွက် ထုတ်ပေးတယ်။
"သင့် လက်မောင်းနာနေတယ်၊ စိုးရိမ်စရာ မရှိ။ ရေနွေးနွေးနဲ့ ကြပ်ပူတိုက်ပေး ပါ။
အလေးအပင် မ မပါနဲ့။ တစ်ပတ်အတွင်း ကောင်းသွားမှာပါ" တဲ့။
ဆေးစာကိုကြည့်ပြီး သူတော်တော်အံ့ဩသွားတယ်။ ကွန်ပြူတာ ကို တော်ေ တ်ာလေးလည်း အထင်ကြီးသွားတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကွန်ပြူတာ ကို အရူးလုပ်ချင်စိတ်လည်း ပေါက်သွားတယ် တဲ့။ ဒါနဲ ဆီး ထည့်တဲ့ ပုလင်းထဲကို
၁။ ရေပိုက်ထဲက ရေ နည်းနည်း
၄။ ဇနီးဆီက ဆီး နည်းနည်းစီ ရောထည့်
၅။ သူ့ဆီး ကိုတော့ ကွန်ပြူတာက သိပြီးသားဖြစ်နေတော့ (ကန်တော့ပါရဲ့) မာစတာဘိတ်လုပ်ပြီး သူ့ရဲ့ သုက် အနည်းအငယ် ပေါင်းထည့်ပြီး ကွန်ပြူ တာဆီ သူပြန်သွားတယ်။
အရင်အတိုင်းပဲ ဆယ်ဒေါ်လာထည့်လိုက်တော့ ကွန်ပြူတာက စစ်ဆေးတော့တာပဲ။ အဲ ဆယ် စက္ကန့်နဲ့တော့ မပြီးဘူး ဖြစ်နေသတဲ့၊ ကွန်ပြူတာ ခေါင်း နည်းနည်း စားသွားတယ်။ အတော်လေးကြာမှ ဆေးစာ ထုတ်ပေးတယ်။
"သင် သိလိုတဲ့ အဖြေအားလုံးကို သိရဖို့ ဒေါ်လာ ၄၀ ထပ်ထည့်ပါ" တဲ့။
ဟုတ်တယ်လေ၊ သူ့ဟာက ငါး မျိုးဖြစ်နေတာကိုး။
ဒေါ်လာ ၄၀ လည်း ထည့်လိုက်ရော ဆေးစာ အပြည့်အစုံထွက်လာတယ်။ ဒီလို......
၁။ သင့်ရေပိုက်ခေါင်းက သံချေးတွေ တက်နေပြီး ရေ က နံနေတယ်၊ ဒီရေကို သုံးစွဲရန် မသင့်၊ ရေပိုက်ခေါင်း အသစ် အမြန်လဲပါ။
၂။ သင့်ခွေးမှာ ဝဲပေါက်နေတယ်၊ လူကို မကူးစက်ခင် ဝဲ ပြောက်ဆေး လူးပြီး ရေချိုးပေးပါ။
၃။ သင့် သမီးက ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဆေးစွဲနေတယ်၊ ဆရာဝန်နဲ့ အမြန် ပြပြီး ဆေးဖြတ်ပေးပါ၊ AIDS ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ရှိတယ်။
၄။ သင့် ဇနီးမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ၊ မိန်းကလေး အမွှာပူး၊ သင်နဲ့ ရတာမဟုတ်။ ကွာရှင်းဖို့ ရှေ့နေတစ်ယောက် အမြန်ရှာထားပါ။
၅။ အဲသလိုသာ လက်ကမျင်းနေရင် ညာဖက် လက်မောင်းနာတာ ဘယ်တော့မှ မပျောက်ဘူး မှတ်ပါ တဲ့။
အဲဒီလူ ဖြုံသွားတယ်။ နောက် မစ ရဲတော့ဘူး။
ဒီနေ့ ကြည်နူးမိတဲ့ ဓာတ်ပုံ သုံပုံ
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 6/29/2014 - No comments
ထိုင်းနိုင်ငံက စစ်တပ်အရာရှိ(ကြည်း၊ ရေ)တွေနဲ့ ရဲအရာရှိ အမျိုးသမီး ၂၀၀၊ ဗုဒ္ဓဂယာ၊ မဟာဗောဓိမှာ စုပေါင်းသီလရှင်ဝတ်ကြတာ တဲ့။
နွားလေးက လေးနှစ်ကြာကွဲကွာနေတဲ့ ဆရာသမားကို ဦးချနေတာ၊ နည်းနည်း ထပ်ပြောရရင် လည်လှီးသတ်မယ့်် သေဘေးကနေ အကာအကွယ်ပေးဖို့ တောင်း ပန်တာလို့လည်း အဓိပ္ပါယ် ဖော်ကြပါသတဲ့။ ဆရာတော်ဘွဲ့က အေ၊ အာနန္ဒ၊ စင်္ကာပူ၊ သီရိလင်္ကာရာမာယကျောင်းမှာ ၁၉၉၆ ခု ဝန်းကျင်က ကျောင်းထိုင်သွား ခဲ့တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးပါ။
တရားဝင် တတိယအကြိမ်(တရားမဝင် စတုတ္ထအကြိမ်)ရောက်မှပဲ စာအုပ်နဲ့ ကမ်းလက်လိုဂို တွဲလိုက်နိုင်ပါတော့တယ်။
in Reader's Digest, ဇင်ဝေသော် - on 6/29/2014 - No comments
" ဒီအပတ် တနင်္ဂနွေမှာ ဘယ်သူနဲ့ အပြင်ထွက်မှာလဲ ဟေ့ " လို့ မေးကြတယ်။
in ပြုံးစိစိ, သီဟနာဒ - on 6/28/2014 - No comments
အစာအိမ်မကောင်းလှသေးတဲ့အချိန်မှာ ကွမ်းဖြတ်လိုက်ပါ။ မဖြတ်ရင်တောင် တစ်ရက်ကို သုံးယာလောက်ပဲ စားပါလို့ လျှောက်ထားသူ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဇနီးမောင်နှံ နှစ်တွဲရှိပါသည်။ လျှောက်ရာမှာလည်း ဒကာကြီးများက ကိုယ်တိုင် မလျောက်ဘဲ ဒကာမကြီးများကနေ တဆင့်"နင်လျောက်လိုက်" လို့ အင်အားသုံးပြီး ဇနီးများကို စေခိုင်းခြင်းမျိုး ဖြစ်ကြပါသည်။(မတရားလှပါ)
ဒကာမများက ထိုထိုကိစ္စများကို အထူးပါးနပ်စွာ ကိုင်တွယ်တတ်ကြလေသည်။
သို့သော် သူတို့လျောက်ထားသည့် ကွမ်းသုံးယာ ကိစ္စကြားတိုင်း ဤရဟန်းအာရုံမှာတော့ ဤ ပုံက ပေါ်ပေါ်လာတတ်လေသည်။
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 6/28/2014 - No comments
ဒီခေတ်မှာ ဒီလို ရေးဟန်တွေ တွေ့ရပါတယ်။
"တာမွေတရားရုံး အမှုရင်ဆိုင်တဲ့နေ့ မှာ "ရွှေည၀ါ၊ ၀ီရသူနဲ့ပါမောက္ခတို့ " အစီအမံနဲ့သန္တိသုခအရေး အဓိက တရားခံဖြစ်သူဟု သူတို့စွပ်စွဲကြတဲ့ "အံ့မောင်" ကို အပြစ်ပေးရန် ကြွေးကြော်သံများ အော်ဟစ်၊ ဗီနိုင်းချပ် ပိုစတာများ ထောင်ပြတာတွေကို ထုတ်ဖော်ပြုလုပ်ကြပါတယ်။"
ရွှေညဝါက(ဆရာတော်)၊ ဝီရသူက ကလောင်နာမည်(သို့)လှုပ်ရှားမှုနာမည်၊ ပါမောက္ခက ဦး(သို့)မကွေးဆရာတော် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
"ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ (ပီနန်ဘုန်းကြီး)ကလည်း ကျောင်းချိတ်ပိတ်ပြီး ဘုန်းကြီးများ အဖမ်းခံရတဲ့ကိစ္စရဲ့ လက်သည်ဟာ အံ့မောင်လို့ သာ"
(ဆရာတော်တွေကိုယ်တိုင်က "ဘုန်းကြီး"လို့ သူတို့ကိုသူတို့ သုံးတတ်ပေမဲ့ ဘေး လူက ရေးရင်၊ ပြောရင်တော့ ဘုန်းကြီးလုိ့သုံးတာ သိပ်မတွေ့ရတတ်ပါဘူး။ ဥပမာ တိပိဋကမြင်းခြံဆရာတော်၊ ယောဆရာတော်၊ပီနန်ဆရာတော်၊ သီတဂူဆရာတော်)
သာသနာရေးဝန်ကြီး "ဗိုလ်ဆန်းဆင့်"ကို သမ္မတအမိန့် နဲ့တာဝန်က ဖယ်ရှားပြီးနောက်ပိုင်းမှ ဆက်တိုက် ပေါ်လာတာပါ။
ဒီသတင်း ပြန့် နှံ့ သွားစေချင်တာမှာ သမ္မတ "ဗိုလ်သိန်းစိန်" တယောက် ထိပ်ဆုံးက ပါနေပါတယ်။
ဗကပ ၀က်ဘ်ဆိုက်ကနေ ပေတလွှာစာတရွက် ရေးဖွဲ့ ရတဲ့အထိ "ဗိုလ်အောင်မင်း" တောင်းပန်စာဟာ ရိုးပုံရရဲ့ လားလို့ သံသယ၀င်မိတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာ သိပ်ကောင်းပုံရတဲ့ ဒေါက်တာရဲ့ အင်္ဂလိပ်ရေးဟန် သိပ်လွှမ်း တဲ့ မြန်မာစာရေးထုံးလို့ပဲ ယူဆလိုက်ရပါတယ်။
"ရွှေည၀ါ၊ ၀ီရသူနဲ့ပါမောက္ခတို့ " တဲ့။
နိုင်ငံခြားမှာ ဒါတွေရှိတယ် (၂)
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ, ကျောင်းတွင်းမှတ်စု - on 6/27/2014 - No comments
မနေ့က တရုတ်၊ စလုံးသီလရှင် မဒီပင်္ကရာရောက်လာသည်။ သူမကြုံတွေ့နေ ရသည့် အခြေအနေကို ရှင်းပြရင်း အကူအညီတောင်းခံရန် ရောက်ရှိလာခြင်း မျိုးဖြစ်သည်။
သူမမှာ မိခင်ကြီးရှိခဲ့သည်။ ထေရဝါဒသီလရှင်ဘဝဖြင့် ဘယ်ကျောင်းမှာမှ မနေ၊ သူမအိမ်ခန်းမှာပဲ မိခင်နှင့်အတူနေရင်း သတိပဋ္ဌာန် ပွားနေသူဟု သိရသည်။ သူမကို သိသည်ကတော့ ၅နှစ် ၆နှစ်ရှိပြီဟုထင်သည်။ ၁၉၉၆ မှာ သီလရှင် ဝတ်ခဲ့ သည်ဟု သိရသည်။
ယခု သူမ မိခင်ကြီး မရှိရှာတော့၊ ဆုံးပါးသွားလေပြီ။ ထို့နောက် ဒုတိယပြသနာက သူမအဆိုအရ အိမ်မှာ သူမတစ်ယောက်ထဲ နေခွင့်မရှိ။ အာဏာပိုင်များက အခြား တစ်ယောက်နဲ့ အတူနေရမည်ဟု ညွှန်ကြားလာသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ဤကို ထောက်ဆပြီး အိမ်က သူမ အပိုင်မဟုတ်၊ အစိုးရအထောက်အပံ့ဖြင့် ငှားရမ်းနေနေသော အိမ်ဟု ယူဆရပါသည်။ မိခင်နှင့်အတူနေရာမှာ ပြသနာ မရှိသော်လည်း သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ အတူနေဖို့ကျတော့ သီလရှင်ဖြစ်နေသည့် အတွက်(အိပ်ချိန်၊ စားချိန် မတူညီကြခြင်း စသည်)အခက်ကြုံနေရကြောင်း ဆိုပါ သည်။
ယခု သူမ အိမ်အပိုင် ဝယ်လိုသည်။ သို့သော် သူမမှာ ငွေက လုံလုံလောက်လောက် မရှိ။ အစိုးရဆီက ချေးငွေရရန် သူမမှာလက်ရှိ လစာရသည့် အလုပ်ရှိနေရမည်။
ထို့ကြောင့် မိမိတို့ကျောင်းအနေနဲ့ သူမကို အလုပ်ခန့်လို့ ရ၊ မရ အကူအညီတောင်းခံခြင်းမျိုး ဖြစ်လေသည်။
သူမနဲ့ ဆင်ဆင်တူ ရဟန်းတစ်ပါးကိုတော့ ရဟန်းဖြစ်နေသဖြင့် အပြီး လက်ခံထားဖို့ သဘောတူခဲ့သည်။ ယခုဆိုလျင် သူ၏ မင်ဒရင်း(တရုတ်)ဘာသာနဲ့ ထေရဝါဒသင်တန်းများ အရှိန်အဟုန် အတော်ကြီး ကောင်းနေပေပြီ။ ထေရဝါဒအဆုံးအမကို စင်ကာပူမှာ တရုတ်လို ဖြန့်ဝေနိုင်သည့် ပထမဆုံး သင်တန်းဟုပင် ဆိုကြသည်။ သာဓုခေါ်ဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါ၏။ နိုင်ငံခြားသား(အမှန်မူ ဤနိုင်ငံက သူတို့နိုင်ငံသာ မဟုတ်ပါလား) ဝင်လာမှာ မကြောက်တတ်သည့် မိမိ၏ မူရင်းစိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် မှန်သည်ဟု ယူဆရပါသည်။ စရိုက်သဘာဝများ ကွဲပြားသော်လည်း နားလည်မှုက ညှိနှိုင်းလို့ ရပါသည်။
(Artist~Min Wae Aung)
ယခုမူ သူမကား သီလရှင် ဖြစ်နေသည်။
အကယ်၍ ကျောင်းက အလုပ်ပေးနိုင်လျင် သူမအတွက် အဆင်ပြေသွားသလို သူ့လူမျိုးထဲ သာသနာပြန့်ရေးအတွက် လက်ရုံးတစ်ခုလည်း ရနိုင်ကောင်း၏ ယူဆမိသည်။
သို့သော် ဤကိစ္စက ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်လို့ မရ။ ကော်မတီနဲ့ ညှိနှိုင်း၊ ကော်မတီကို တိုက်တွန်းပေးလို့သာ ရနိုင်သည်။
ဘဝဟူသည် နေရာတိုင်းမှာ သူ့အခက်အခဲနဲ့သူ ရှိနေ၏။ ယင်းတို့ကို ဒုက္ခဟု ရင့်ရင့်သီးသီး အမည်မတပ်လိုပါ။ သို့သာ် လူတိုင်းမှာ၊ နေရာတိုင်းမှာ မမြင်အပ်သည့် စိန်ခေါ်မှုများ ရှိနေတတ်လေသည်။
မဒီပင်္ကရာကြုံတွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုမျိုးသည် ကျွန်ုပ် စိတ်ကူးထဲတွင် ရှိမနေရိုး အမှန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
Labels: 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ, ကျောင်းတွင်းမှတ်စု
သမ္မတ ပခုံးနှစ်ဖက်မှာ သွားဒဏ်ရာတွေနဲ့
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 6/27/2014 - No comments
ပထမဆုံး အွန်လိုင်းဂျုတ်နဲ့ စပါမယ်။
Messi carrying Argentina.
Neymar carrying Brazil.
British Airways carrying England.
ဘောလုံးပွဲမှာ အနီကတ်ထိမှ ပွဲပယ်ခံရတယ်လို့ မသိဘဲ ဝင်မပြောပါနဲ့။
လူးဝစ်ဇ် ဆွာရက်တို့က တစ်နီမှမထိဘဲ ၃၄ ပွဲ အပယ်ခံထားရပါတယ်။
တရုတ်က မူဝါဒငါးချက်နဲ့ နှစ် ၆၀ မြောက် ပေါ်လစီ စည်းရုံးရေး အရှိန်မြှင့် ဖို့ မြန်မာ သမ္မတနဲ့ အိန္ဒိယ ဒု ဝန်ကြီးချုပ်တို့ကို လှမ်းဖိတ်ပါတယ်။
မနေ့ကတင်ပဲ တရုတ်ပိုင်နက်မြေပုံအသစ်ထုတ်လိုက်လို့ တရုတ်ရဲ့ ပယ်လယ် ပိုင်နက်က ပို ကျယ်လာတယ်။ ဝါးပင်စိုက်ပြီး ဝါးပင်သွားရာ ခြံဝင်းသတ်မှတ် သလို လေ။ တရုတ်မြေပုံက အသစ်ထုတ်တိုင်း ကျယ်ကျယ်လာ လို့ အိမ်နီး ချင်းတွေ မခံမရပ်ဖြစ်ချိန် မြန်မာနဲ့တို့များ ပြသနာမရှိဆိုတာ ပြချင်ပုံ ရပါတယ်။ ဘယ်ရှိပါ့မလဲ။ ကြည့်။
ကြားရတဲ့ အတွင်းသတင်းအရ နှစ်နိုင်ငံသဘောတူလို့သာ ပြောတာ သမ္မတခမျာ ရှက်လို့ အင်္ကျီလက်ရှည်ကို မချွတ်ရဲရှာဘူး။ ဘယ်ဘက်ပခုံးမှာ အကိုက်ခံထားရ တဲ့ ဒဏ်ရာကြီးနဲ့မို့တဲ့။
ဒါတင်မပြီးသေးဘူး။ အိန္ဒိယ ဒု ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်း သူ့ ညာဘက်ပခုံးကို စိုက် ကြည့်နေတာ။
ဘရာဇီးက အမျိုးသမီးလို ဆွာရက် မကိုက်လို့ ကျန်နေတဲ့ဘက်ကို ဝင်ကိုက်သွားမှ ဒုက္ခ။
(ပုံ နှစ်ကို ကြည့်ပါ)
ကဲ သမ္မတကြီးအတွက် မစိုးရိမ်သင့်ဘူးလား။
in ဇင်ဝေသော်, ဘောလုံး - on 6/26/2014 - No comments
ပေါ်တူဂီနဲ့ ဂါနာကလည်း လက်ထဲမရှိတဲ့ ကံကြမ္မာကို အားကိုးရင်း ခြေကုန် နင်းကြလိမ့်မယ်။
အမေရိကန်နဲ့ ဂျာမဏီကလည်း နှစ်ယောက်စလုံး ဂျာမန်နည်းပြတွေ။
မကန်ဘဲတက်နေရသူတွေချင်း သူသေကိုယ်သေ မကန်မှာတော့ သေချာတယ်။
ဘာပြောပြော လူပြောလွတ်ရုံပဲကန်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ သရေကျလို့ ဖီဖာက အရေးယူလို့မှ မရတာ။
ပေါ်တူဂီက ဂါနာကို လေးဂိုးလောက်ပြတ်မှ(ပြတ်လောက်တဲ့ခြေရော ရှိလို့လား)၊ ဟိုဘက်ကလည်း တစ်ဘက်ဘက်က ဂိုးပြတ်ကိုရှုံးမှ။
ကမ္ဘာ့ဖလားမှာတော့ မက်စီ လေးဂိုး၊ ရော်နာဒို ဂိုးမရှိနေမှာ။
လူးဝစ်ဆွာရက်ဇ်က ငုံ့ကိုက်နေချိန် မက်စီနဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယားဂိုးသမားက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စရင်းနောက်ရင်း ရီနေကြတယ်။
အားကစားပါဆို အဲသလိုလေးလည်း အင်တာတိန်းမှပေါ့။
ဒါက " ကံပဲ " တဲ့
World Cup - Uruguay President: Suarez not picked for his manners
ရေးလို့မှ မပြီးသေးဘူး၊ ဥရုဂွေးသမ္မတ မူဂျီကာဆီက တက်လာပြီ။
"ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ ဒိုင်လူကြီးပြောတာကို လိုက်နာ၊ ဒါပဲ"
"တီဗွီပြတဲ့အတိုင်းသာ ဆုံးဖြတ်ကြေးဆိုရင် မပေးလိုက်တဲ့ ပင်နယ်တီတွေ၊ လက်ထိဘောတွေ အများကြီး၊ ဒါက ကံပဲ" တဲ့။
သူ့ဖလော်နဲ့သူတော့ အဟုတ်။ ကိုက်လည်း ဒိုင်မမြင်ရင် ပြီးသွားပြီ။
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 6/26/2014 - No comments
မနေ့က ရဟန်းတစ်ပါးရဲ့ ပို့စ်ပေါ်မှာ " အချက်အလက် ပဲ ပေးပါ။ အမှားအမှန်ကို စာဖတ်သူတွေက ဆုံးဖြတ်ပါစေ" ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်မျိုး လူတစ်ယောက်က ကွန်မင့်ပေးထားတာတွေ့လိုက်ရလို့ ပြုံးမိတယ်။
ဒါနဲ့ အနည်းငယ်ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ သိပ္ပံဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဒီနေ့ ဖတ်လိုက်ရပါ တယ်။
ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောဆိုင်ရာ သုတေသနတွေ့ရှိမှုနဲ့ ဆက်စပ်လို့ပါ။
လူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကဲဖြတ်ရာမှာ အကောင်းလွန်နေတတ်ပါသတဲ့။
ကျောင်းသား ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းက သူတို့ဟာ ကျန်သူတွေထက် သာတယ်လို့ ယုံကြည်ပါသတဲ့။
ကျောင်းသား ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းက သူတို့ဟာ ကျန်သူတွေထက် သာတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပြန်ပါသတဲ့။
ငယ်သေးလို့ မိမိကိုမိမိ အထင်ကြီးတာလားဆိုတော့ မဟုတ်ပြန်ဘူး။
ပါမောက္ခ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက သူတို့ဟာ အခြားပါမောက္ခတွေထက်သာတယ်လို့ မှတ်ထင်တတ်ကြပြန်ပါတယ်။
ဒါတွေတင်မကပါဘူး၊ မိမိရဲ့စကားပြောကောင်းမှု၊ ရယ်စရာပြောတတ်မှု၊ ရိုးသား မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ကိုယ်ချင်းစာနာတတ်မှု၊ ရက်ရောမှု.... စတာတွေအပေါ်မှာလည်း အမှတ်တွေ ပိုပေးမိတတ်ကြပါသတဲ့။
သူများရဲ့ အရည်အသွေးကို အကဲခတ်ရာမှာ မဆိုးသလောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကဲဖြတ်ရာမှာတော့ အများစုက သိပ်မစွံတတ်ကြဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဆောင်းပါးရှင် အကြံပြုတာကတော့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဆို၊ အသံသွင်းထား၊ ပြန် နားထောင်ကြည့်ပါတဲ့။
ဒီတွေ့ရှိမှုက ဗုဒ္ဓရဲ့ အတ္တဗဟိုပြုဝါဒ(Ego-centric)နဲ့ အသံထွက် မကွဲလှဘူး။
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 6/25/2014 - No comments
၁။ ဩစတေးလျ (Full Stop)
၂။ ဂျပန်(Full Stop)
၁။ သာသနာရေးဝန်ကြီး(Full Stop)
၂။ ဦးအံ့မောင်(Full Stop)
၃ ဘဒ္ဒန္တဇနိတ(သန္တိသုခ၊ ကျောင်းစောင့်)???
အဲ့လောက်မဟုတ်ရင်တောင် အဲ့လိုတော့ မလုပ်ကြပါနဲ့
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 6/25/2014 - No comments
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်က သူ့ပါတီဝင်တစ်ယောက်ရဲ့ အမှားအတွက် တရားဝင် တောင်း ပန်သတဲ့။
ကဲ လုပ်ကြပါအုံး ဆရာကြီးတို့ရယ်။
အမျိုးသမီးတွေ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ပါဝင်မှုနဲ့ ကလေးယူကြဖို့ဆွေးနွေးကြရာမှာ သူ့ပါတီဝင်အရာရှိ ဦးအာခီဟီရို စူဇူကီက အတိုက်အခံပါတီရဲ့ ဥပဒေပြု အမတ် ဒေါ်အယာကာ ရှီအိုမူရာကို
"နင်ကော ဘာလို့ ယောက်ျားမယူတာလဲ၊ နင်ကရော ကလေးယူလို့ မရဘူး လား"မေးလိုက်မိလို့တဲ့။
ဦးအာခီဟီရို စူဇူကီ တောင်းပန်နေပုံ၊ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်က သူ့လူရဲ့နှုတ်ထွက် အမှားအပေါ် တာဝန်ယူပုံတွေက သမ္မတကြီးတို့အတွက် လေ့လာစရာ။ (လူငယ်လေသံနဲ့ ခွိခွိ)
ထားပါ။ အဲ့လောက်ကြီးတော့ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘူးကွာ။
(လူငယ်လေသံနဲ့) အာ့ဆိုလည်း ဆွာရက်ဇ်လိုတော့ ဂိုးသွင်းမရလို့ဆိုပြီး နောက် တန်းလူရဲ့ ပခုံးကို ဝင်မကိုက်သင့်ဘူးနော်။
တကယ်ကိုက်တာ ဗျာ။ အဲ့ကိုကြည့်ပြီး ရယ်ချင်လွန်းလို့ ညက အိပ်ရေးပျက်တယ်။
ချယ်လ်ဆီးနောက်တန်းလူကို ကိုက်တုံးကလည်း အဲလိုပဲ။
ကမ္ဘာကလည်း ပြသနာ။ ကုန်းနေအောင်တောင်းပန်တဲ့ပုံက ကမ္ဘာမကျော်ဘဲ ငုံ့ကိုက်တဲ့ပုံက ကမ္ဘာကျော်တယ်။
ဘာဖြစ်ဖြစ် ငုံ့တော့ မကိုက်ကြေး ဗျာ။
အုတ်ဂူတွေ မရှိပေမဲ့ စာအုပ်တွေ ရှိနေစေရပါမယ် အဖေနဲ့ အမေ
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 6/24/2014 - No comments
၁၆ ရာစု ဥရောပအတိုင်း
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 6/24/2014 - No comments
ဒီလိုကွ၊ ကျောင်းကနေ ဆေးရုံကြီးကို သွားကြတာ။ ကျုံးဘေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာ ဆိုက်ကားဆရာက လမ်းလယ် တည့်တည့်ကြီးကနေ နင်းတာကွာ။ ငါလည်း လန့်တာပေါ့။ ဒါနဲ့
"ဒကာကြီး ခင်ဗျားက ဘာ့ကြောင့်လမ်းလယ် တည့်တည့်ကနေ နင်းနေရ တာတုံး၊ ဘေးချနင်း" လုိ့ပြောတော့
"ဘုန်းဘုန်းတွေ ဆိုက်ကားပေါ် ပါနေတာပဲ ရပါတယ်" တဲ့ကွာ။
"ပါပါ၊ မပါပါ၊ မနင်းရဘူး။ နောက်ပြီး လော်ရီတက်ကြိတ်ရင် ဘုန်းဘုန်းလည်း သေ တာပဲ"ဆိုပြီး ဘေးချနင်းဖို့ မနည်းပြောယူရတယ်ဗျာ-
ဆရာသမားက ဒီ ရောက်စဉ် သူ့အတွေ့အကြုံကို ဖောက်သည်ချခဲ့တာပါ။
ဘုန်းကြီးပါလာတော့ ဆိုက်ကားဆရာလည်း သတ္တိကောင်းသွားတယ်။
ဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး စဉ်းစားမိတာပါ။ လက်ရှိအနေအထားအရ ဘုန်းကြီးတွေဘဝ ကလည်း မလွယ်လှဘူး။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က အစ ဆိုက်ကားဆရာ အဆုံး လိုက်ထိမ်းပေးနေကြရတယ်။
တကယ်၊ ၁၆ ရာစု ဥရောပအတိုင်းပဲ။
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 6/23/2014 - No comments
နိုင်ငံခြားမှာ ဒါမျိုးတွေကိုလည်း လျှောက်ထားရင် ပြောပေးရပါတယ်။
နိုဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း ချည်းပဲ မဟုတ်ပါ။
လူထုကြားမှာ တကယ်ရှိ၊ တကယ်ဖြစ်နေတာတွေအပေါ် ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အမြင်နဲ့ ရပ်တည်ချက်ပေါ့။
ဘလော့ဂ်ပေါ်က စာဖတ်ပရိသတ်တစ်ယောက်ကတော့ မရောင်ရာ ဆီလူးလို့ ဆိုပြီး ဝင်ငေါက်သွားဖူးတယ်။
ခပ်နိမ့်နိမ့် ကွန်မင့်လို့ပဲ သဘောထားလိုက်ရပါတယ်။
ဝိနည်းကလွဲရင် သူတို့ကိုလည်း ဘေးဖယ်ထားလို့ မသင့်ပါဘူး၊ အားလုံးက သဗ္ဗေသတ္တာပဲ။
Thank you very much for accepting our invitation to giveatalk on the subject appended below:
Question - LGBT (Lesbian(မ-မ), Gay (ကျား-ကျား), Bisexual (ကျား+မ၊ မ+ကျား) , Transgender(ကျား ကနေ မ ပြောင်း၊ မ ကနေ ကျားပြောင်း)
- what is the Buddhist standpoint?
Is same-sex relationship acceptable?
Will there be karma (just like people who make the decision to commit suicide)?
in ဇင်ဝေသော်, ရသ ဆင်ခြေဖုံး - on 6/23/2014 - No comments
The Four ဆိုတဲ့ တရုတ်သမိုင်း ဇာတ်လမ်းတွဲကြီးရှိတယ်။ မြန်မာပုဂံ သမိုင်း နဲ့ တော်တော်ဆင်ပါတယ်။ အဓိက ဇာတ်ဆောင်ကောင် လေးယောက်က ပုဂံ လူစွမ်းကောင်း လေးယောက်နဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် တူမယ်။
မတူတာက ကျန်စစ်သားနေရာ ခေါင်းဆာင်က ခြေထောက်မကောင်းလို့ ဘီးတပ် ကုလားထိုင်နဲ့ ဖြစ်နေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်ဟာက မူရင်းလည်း မသိပါ။ တိုက်ဆိုင်မှု ဖြစ်နိုင်သလို ဇာတ်ကွက် ဖန်တီး မှုလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဝမ်းနည်းစရာ အကောင်းဆုံးအခန်းက ဘုရင်ကို ထွက်ပြေးခိုင်းပြီး သူတို့လေးယောက်က သိန်းချီတဲ့ ရန်သူတွေကို ရင်ဆိုင်နေရစ်ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံး ဇာတ်သိမ်းခန်းပါ။
ဘီးတပ်ကုလားထိုင်နဲ့ ခေါင်ဆောင်မင်းသား ပြောလိုက်တဲ့ စကားက
"See you next life." တဲ့။
ဇာတ်လမ်းတွဲက ဒါနဲ့ သိမ်းထားတယ်။
တချိန်ချိန်မှာ စီးပွားရေးတွေကောင်းလာ၊ အနုပညာ(အထူးသဖြင့် ငွေကုန်ကြေး ကျများတဲ့ ရုပ်ရှင်လို)အဆင့်တွေ မြင့်မားလာပြီး ပုဂံခေတ်အကြောင်း ဒီလို ဇာတ်လမ်းတွဲကြီးတွေ ရိုက်နိုင်ရင် ကောင်းမယ်။
တိုက်ဆိုင်လို့ ဂျူး ဟောလီးဒေး ပြန်တင်တယ်
in ဇင်ဝေသော်, နိုင်ငံရေး ဂျုတ် - on 6/23/2014 - No comments
တစ်ခါက အဒေါဖ် ဟစ်တလာဟာ ဗေဒင်ဆရာဆီကို ဗေဒင်သွားမေးတယ်။
"ဘယ်နေ့ ကျနော် သေရမှာလဲ ဆရာ"
"ဂျူး တွေရဲ့ ဟောလီးဒေး နေ့ မှာ သေရမှာပါ"
"ခင်ဗျားဟာက သေချာလှပါလား၊ ဂျူး ဟောလီးဒေးမှာ သေရမယ်လုိ့"
"ဒီလိုပါ၊ ခင်ဗျား ဘယ်နေ့ပဲ သေသေ အဲဒီနေ့ဟာ ဂျူး တွေရဲ့ ဟောလီးဒေး..."
RFA သတင်းမှန်ရင်တော့ ဦးသိန်းစိန်က လူထုမေတ္တာ ရဦးမှာပဲ။
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 6/22/2014 - No comments
ဒီနေ့ သတင်းအရ ဂျင်မီကာတာနဲ့ တော်တော်ဆင်လာပြီ။
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးအကြံပေး ဦးအံ့မောင်ကို အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနက မနေ့ညက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ နေပြည်တော် အသိုင်းအ၀ိုင်းက သိရပါတယ်။
ဦးအံ့မောင်ကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တဲ့ကိစ္စဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက အဖမ်းခံထားရတဲ့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဦးဆန်းဆင့်ကိစ္စနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါဝင်ပတ်သက်သူ ၉ဦးရှိပြီး အဲဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကို အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနက ဆက်လက် အရေးယူသွားမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 6/22/2014 - No comments
ပီနန်ဆရာတော်ကြီးကို ပြန်မပေးချင်ရင် ရွှေတောင်ကုန်း ဆရာတော်ကြီး (သို့)ဖားအောက်ဆရာတော်ကြီးအား မဟာသန္တိသုခကို လှူဒါန်းသင့်ပါတယ်။
ဟာ ဒီကောင်(ဒီကိုယ်တော်)အူတူတူတွေ လျှောက်ရေးနေပြီလို့ မထင်ကြပါနဲ့။ စိတ်ဝင်စားရင် ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါ။
ဒီကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က ပြည်ပသာသနာပြု ရဟန်းတော် များ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရေး ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ဒါဆိုရင် မဟနပိုင်(သို့)အစိုးရပိုင် သာသနာပြုကျောင်း ကမ္ဘာမှာ ဘယ်နှကျောင်း ရှိပါသလဲ။
ကျောင်းမရှိဘဲ ဒီကျောင်းဆင်း သံဃာတွေကို ဘယ်နိုင်ငံက ဘယ်ကျောင်းကို သွားပို့ကြမှာလဲ။
ကမ္ဘာနိုင်ငံ အသီးသီးရှိ ကျောင်းအများစုက
၁။ မဟာစည် ဩဝါဒခံ ကျောင်းများ(ရွှေတောင်ကုန်း ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ရိပ်သာခွဲများ အပါအဝင်)
၂။ ပီနန်ဆရာတော်ကြီး တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းများ
၃။ နှောင်းပိုင်းမှာ ဖားအောက်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဩဝါဒခံ ကျောင်း၊ ရိပ်သာများ
၄။ ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကျောင်းများသာ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အထူးသတိချပ်ရန်က ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ အခြား နိုင်ငံခြားရှိ ယင်းကျောင်းတွေကို ညအချိန်မတော်မှာ ဝင်သိမ်းလို့ မရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပို့စရာကျောင်း မရှိဘဲ "ကမ္ဘာ့သာသနာပြုရဟန်းတော်များ သင်တန်း"ခေါ်ယူလိုက် ပါကလည်း ကြားရကောင်းသလောက် အဓိပ္မါယ်က တစ်စက်မှ မရှိဖြစ်နေပါ တယ်။(စဉ်းစားတတ်သူတွေက မယုံကြည်)
ကမ္ဘာ့သာသနာပြုဖို့ဆိုရင် ပီနန်ဆရာတောကြီးကို (ဂရန်ရှိသည် ဖြစ်စေ၊ မရှိသည် ဖြစ်စေ လှူ ဒါန်းခြင်းက အကျိုး ပိုများပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုမှ မလုပ်နိုင်ရင် မဟာစည်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ တပည့်ကြီး တစ်ပါးဖြစ် တဲ့ ရွှေတောင်ကုန်း ဆရာတော်ကြီးအား လွှဲပြောင်းလှူဒါန်းရင်(သို့) လက်ရှိအနေအထားအရ လူမျိုးခြားထဲ သာသနာရောက်အောင်ပြုနိုင်ပြီး သက်တော်ထင်ရှားလည်း ရှိနေဆဲ ဖားအောက်ဆရာတော်ကြီးအား မဟာသန္တိ သုခကို လှူဒါန်းလိုက်ရင် ပြည်ပသာသနာပြုလုပ်ငန်း အတွက် ကျေးဇူး များပါ လိမ့်မယ်။
ပြောမယ့်သာပြောရတာပါ။ ပြည်ပသာသနာ တကယ်ပြုနိုင်တဲ့ အထက်ပါ ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးကလည်း ကြားသိရသလောက် မဟနနဲ့ အဆက်အဆံ လုပ်တော်မမူကြပါ။ မဟနက အပ်မှာမဟုတ်သလို ယင်းဆရာတော်ကြီးတွေ ကလည်း လက်ခံ မခံက မသေချာပြန်ပါ။
အကျဉ်းချုပ်တော့ ပြည်ပသာသနာ တကယ်ပြုနေတဲ့၊ ပြုနိုင်တဲ့၊ ဩဝါဒခံကျောင်းတွေလည်း ရှိတဲ့ ဆရာတော်ကြီးသုံးပါးနဲ့( ပီနန်ဆရာတောကြီးအပါအဝင်)မဟနက ပြဒါးတစ်လမ်း၊ သံတစ်လမ်းဖြစ်နေခြင်း ထူးခြားနေပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်မှုသက်သက် မဖြစ်တန်ရာ။
မှတ်ချက်။ သီဟနာဒက ဖားအောက်ဆရာတော်ကြီးတပည့် မဟုတ်ပါ။ ပီနန် ဆရာတော်ကြီးတပည့်ဖြစ်ပြီး မဟာစည် သတိပဋ္ဌာန်နည်းကို ကျင့်သုံး၊ ဖြန့်ဝေသူ သာမင်ညောင်ည ရဟန်းတစ်ပါးသာပါ။
in ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 6/22/2014 - No comments
I am so nice2him but
1 day I go2climba3 outsideahouse to peep. But the couple saw
me, so I panic and4down. The man rushed out and wanted to5with me. I ran until I fell6and threw up. So I go into 7-eleven and grabbed some 8 to throw at him. Then I tooka9 and try to stab at him. 10 God he run away.
ရဟန်းအသွင်နဲ့ ကြည်ညိုခွင့် မရလိုက်ပေမဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ လေးစားခွင့် ရလိုက်တဲ့ ဆရာကြီး သုံးဦး
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 6/21/2014 - No comments
၁။ ဆရာကြီး ပါရဂူ။ ဖြူ ဖြူ စင်စင် စာပေနဲ့ လူထုကို အကျိုးပြု။ သာသနာကြွေးပြန်ဆပ်။
၂။ ဆရာကြီး ဦးရွှေအောင်။ ဖြူ ဖြူ စင်စင် စာပေနဲ့ လူထုကို အကျိုးပြု၊ မိရိုးဖလာအတွေးကို ချေဖျက်ပေး။ သာသနာကြွေးပြန်ဆပ်။
၃။ ဆရာကြီး ဦးဌေးအောင်၊ ခေတ်သစ်သာသနာပြုရဟန်းတွေရဲ့ မိရိုးဖလာ အတွေးကို ချေဖျက်ပေး၊ ဝိပသနာအရောင် လင်းစေ။ သာသနားကြွေးပြန်ဆပ်။
အများကြီး ကျန်သေးပါတယ်။ သူတို့က ဩဇာအကြီးဆုံးတွေ မို့ပါ။
ဒီ လူထုချစ် သူတော်ကောင်းကြီးတွေ မရှိရှာတော့ဘူး။
ရင်မောတယ် နှစ်ထောင်ကျော် သာသနာရယ်။
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 6/21/2014 - No comments
ကော်စတာရီကာ အီတလီကို နိုင်တော့
အင်္ဂလန်က အော်တို အပြင်ရောက်သွားတယ်။
in Politics - on 6/21/2014 - No comments
in ဘာမှန်းမသိ - on 6/20/2014 - No comments
မြန်မာပြည်မှာ ဘာတွေဖြစ်ကုန်မှန်း မသိ၊ လိုက်လည်းမမီတော့လို ဒီ ဓာတ်ပုံကိုပဲ
"ဆေးလိပ် မသောက်ရ။ မလိုက်နာပါက ဥပဒေပုဒ်မ ၄၀၉/၁၀၉ အရ အရေးယူမည်"
(Only in India and Myanmar)
သရေကျသွားတဲ့ အမှန်တရား(သို့) ဦးအံ့မောင် ကယ်တင်ရေး မဟာမဟာဗျူ ဟာ
in Politics, သီဟနာဒ - on 6/20/2014 - No comments
အပြင်မှာရှိနေရမယ့် ရဟန်းစစ်တွေကို ထောင်ထဲထည့်တယ်။
ထောင်ထဲကနေ ပြန်လွှတ်ပေးတယ်။ ဘာမှ မရလိုက်။ အပြင်လူ အပြင်ရောက် တာပဲ ရှိတယ်။
ကျေးဇူး အထူးတင်ရမယ့် ဦးဝီရသူနဲ့ အားလုံးရဲ့ အားထုတ်မှု၊ စိတ်ရော နှုတ်ရော ချီးကျူးတယ်။ သရေတော့ ရပြီ။
ဒီနိုင်ငံက သရေကို ပျော်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ နိုင်ငံ။
ဒီ စနက် ဘယ်ကစတာလဲ??
သာသနာရေး ဝန်ကြီးက(သိရသလောက်)လူမှန်ဆိုရင် ဖော်တော့မယ်၊
သတင်းထွက်လာပုံတွေကို ထောက်ဆကြည့်ရင် စတောင် ဖော်နေပြီ။
ဒီတော့ ဆွဲပြီး နှုတ်ပိတ်လိုက်တယ်။ အပြင်လူ အတွင်းရောက်သွားပြန်ရော။
(သိန်းတစ်ရာ ကိစ္စက ရုတ်တရက် ဘယ်ကဘယ်လို ပေါ်လာမှန်း မသိရ။ ခပ်ညံ့ညံ့ လှည့်ကွက်)
ဒါဆို ဒီ စနက်ထဲ ဝန်းကြီးထက် အကောင်ကြီးသူ ပါဝင်နေရမယ်။
ဖြစ်နိုင်တယ်။ အခြား တစ်ယောက်ယောက်လည်း ပါနိုင်တယ်။
အခုတော့ ဘယ်သူ့ အမိန့်လဲ?
သာသနာရေး ဝန်ကြီး အမိန့်။ သူလည်း ဘာမှ မဖြေရှင်းနိုင်။ ကိစ္စပြတ်ရော။
ဒါကို မဖြစ်မနေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ သာသနာရေး ဝန်ကြီးအပေါ် ရောက် လာတဲ့ ဖိအားတွေက ဘာတွေလဲ??
ဒီကိစ္စ အရှုပ်တော်ပုံက သာသနာရေး ဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် ဖွင့်မပြောရင် ဘယ်သူမှ သိမှာ (သိလည်း ပြောရဲမှာ) မဟုတ်တော့ဘူး။
မလှပတာက မရိုးသားမှုတွေ ရှိနေတယ်။ ဝန်ကြီးမှာ တာဝန်ရှိလို့ဆိုရင် သူ့တာဝန် (သို့) သူ့အမှားကို ရှင်းပြခွင့် ပေးရမယ်။
ထောင်ချရင်တောင် မီဒီယာနဲ့ သာသနာရေး ဝန်ကြီး စကားပြောခွင့်ပြုမှ သူတို့ပြောတဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာဖြစ်မယ်။
ဝန်ကြီးက တာဝန်ခံတယ်။ ဘာ ဖိအားမှ မရှိဘဲ သူဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင် သိန်း တစ်ရာ မပါရင်တောင် ဝန်ကြီးကို အနားပေးသင့်တယ်။
ဦးအံ့မောင် (အခြားတစ်ယောက်ယောက် ပါနေဦးမလား??) ကယ်တင်ရေး မဟာဗျူဟာက မနေ့က စတယ်။
အခုတော့ အပြင်လူ အပြင်ရောက်တာကိုပဲ ဝမ်းသာနေကြရတယ်။
နောက် အပြင်လူတစ်ယောက် အထဲရောက်သွားပြန်ရော။
ဒါမှ တို့ နိုင်ငံ။
img source : Myo Min
ကိလေသာအသင်းနှင့် ဘောလုံးကန်ခြင်း(ဖြည့်စွက် တင်ပြ၊ ဆက်ရန်)
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ, ဘောလုံး - on 6/20/2014 - No comments
(3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ,Posted on 10/23/2013)
သီဟနာဒသည် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ကို ကြိုက်၏။ ၁၉၈၇-ခုကထဲ ကဖြစ်၏။ ယခု သူများ မန်ယူမှ ယူ လာသူမဟုတ် ( ဆိုင်တော့ သိပ်မဆိုင်လှ)။ ထို့ကြောင့် အားမနာပါးမနာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖာဂူဆန်လို သဘောထားမိ၏။ တစ်ဖက် ကိလေသာ အသင်းကို စိတ်ကူးဖြင့် လိုင်းနပ် ဆွဲလိုက်၏။
ကိလေသာတို့ လိုင်းနပ်ကား တိုက်စစ်ဆန်၏။ လေးသုံးသုံး ( 4+3+3) ဟုထင် ရသော်လည်း တစ်ခါ တစ်ရံ နောက်တန်း၊ ဘယ်ညာ၊ အစွန်တို့ပါ ရှေ့တက် လာလျှင် နှစ်သုံး၊ နှစ်သုံး ဖြစ်တတ်၏ ( 2+3 – 2+3) ။ ကစားကွက် အပြောင်း အလဲမြန်၏။ ထင်သူက ဘာမှမဖြစ်၊ မထင်သူ ဖြစ်သွားတတ်၏။ ဘောလုံးအထိမ်း အသိမ်းလည်း ကောင်းကြ၏။ ဂေါဏန ဂေါဏော အလွန်လည်း ညီညွတ်၊ အသင်းစိတ်ဓာတ်လည်း ကောင်သည့် ပရော်ဖက်ရှင် အစစ်များဖြစ်ကြ၏။ နဲဗားဆေး ဒိုင်းတို့တည်း။
အကောင်ကြီး၏။ လေထဲက ဘောလုံးကို ဖမ်းရာ၌ တော်သကဲ့သို့ မြေပြင်ဘော ဖမ်းရာတွင်လည်း ကောင်းလှ၏။ ပီတာ မိုက်ကယ်တို့ ၊ ဗန်ဒါဆားတို့ အဖေခေါ်လောက်၏။ တည်ငြိမ်၏။ ပင်နယ်တီတော်တော်များများ ကာကွယ်နိုင် ၏။ မထင်မှတ်သော အဝေးဘောမှ ဂိုးရဖို့ သိပ်မလွယ်။ အချိန်ပိုကစားပြီးလို့ ပင်နယ်တီကန်ရတော့မည်ဆိုလျှင် ရှုံးဖို့များ သည်။ ကိလေသာ ဂိုးသမားကား အငြင်းပွားဖွယ်မရှိတော်လှ၏။ ကစားကွက်စိပ်မှ ပေါက်မည်။သူ့ အားနည်း ချက်ကား အနည်းငယ်လေးနေခြင်းတည်း။
အလွန်ခန့်မှန်းရခက်၏။ တစ်ဖက်သားကို စိတ်ဓာတ်ကျအောင် အလွန်လုပ်နိုင်၏။ သူနှင့် ကစားရသည်ကားမလွယ်။ ဒီကောင်ကြောင့် အဝါကတ်၊ အနီကတ်တွေ ထိတာမနည်းတော့။ ပြီးတော့ နောက်တန်းကစားသမား အစစ်မဟုတ်။ ဘော လုံးခြေထောက်ထဲရှိ၍ တိုက်စစ်ပုံစံပြောင်းလျှင် ဒီကောင်က ဒိဋ္ဌိနှင့် (တွဲ)လင့်လုပ်ပြီး လောဘဆီကို အပိုင်လုံးတွေ ချချပေးတတ်သည်။ ညာထောင့်ဖြတ်ဘောများ ကြောက်စရာကောင်း၏။ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းက အဖေခေါ်ရမည်။
ဒီကစားသမားက သိက္ခာမရှိ။ သို့သော် ပါးနပ်၏။ ဂိုးမပေးရရေးအတွက် ဘာမဆို လုပ်သည်။ ပရိသတ်မေတ္တာကို ရသူတော့မဟုတ်။ ကြောက်စရာကား အလွန်ကောင်း၏။ ဒိုင်လူကြီးမမြင်ဘူးထင်လျှင် အင်္ကျီကိုဆွဲ၏။ လက်ဖြင့် ဘောလုံးကို ထိမ်း၏။ မသိမသာ နောက်ကွယ်မှ ခြေထိုး၏။ အရှက်မရှိ။ အဟိရိက ကို အရှက်မရှိဟုဆိုက မိမိသာ အလွန်ဖြစ်ချေမည်။ မန်စီးတီးက လက်ကောနှင့် ဆင်ဆင်တူသည်။
သူ့အားနည်းချက်ကား ပျော့၏။ သူ့ကို ခပ်တင်းတင်း ကိုယ်တွယ်ရမည်။ ဒီကောင်က ကျိုးမှာတော့ ကြောက်သည်။ ဒိုင်ကောင်းဖို့သာဆုတောင်းရမည်။ ခက်သည်က ဒိုင်ဟူသည်ကလည်း နာမည်ကြီးဘောလုံးသမားတွေကိုဆိုလျင် အဝါ၊ အနီပြရန် လက်တွန့်တတ်၏။ နည်းပြကား ဘာမှ လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိ၊ မြန်မာပြည်မှာဆိုလျင်တော့ ပါးဝင်ရိုက်လို့ရသည်။(အေးချမ်းမွန်ကို သွားရှု)
သူ့အားနည်းချက်က ဒစ်စီပလိန်း(ဥပဒေ)မရှိ၊ ထင်ရာလုပ်ခြင်းတည်း။ သူ့ဖက်က များများဖောက်နိုင်လျှင် ပင်နယ်တီရနိုင်သည်။ သူကား အဟိရိကလောက် အကင်းမပါး။
ကစားကွက်ရှုပ်သည်။ အရှုပ်ကြိုက်သည်။ ခန့်မှန်းရ အခက်ဆုံးကစားသမား တည်း။ သူ့ကို လူကပ် ကစား၍မရ၊ လှည့်ထွက်သွားတတ်သည်။ လူကပ်ကစား ၍မရတော့ သူ့ဆီက ထွက်လာမည့် ဘောလမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့ရန်သာရှိ၏။ သူလည်း နောက်တန်းကစားသမား အစစ်မဟုတ်။ ရောဘက်တိုကားလို့၊ အက်ရှလေကိုးတို့လိုပင်တည်း။ နောက်တန်းဟုသာဆိုသည် တစ်ဖက်သား ပင်နယ်တီ ဧရိယာအပြင်မှာရှိနေတာ များသည်။ သူက ဣသာ၊ မစ္ဆရိယတို့နဲ့ လင့်(ခ်)လိမ့်မည်။ ဤလမ်းကြောင်းရအောင်ပိတ်ရမည်။ သူ့အားနည်းချက်က ဘောထိမ်းမသေသပ်ခြင်း၊ ဘောပေးမှားခြင်းတည်း။ ဘောထိမ်း မသေသပ်သူများ နေရာ ပျောက်တတ်သည်။ ပထမလိုင်းနပ်မှာ သူ ပါ၊ မပါ မသေချာသေး။
ဤနောက်တန်းလေးယောက်ကို သာမန်ကြည့်လျှင် ဘယ်နောက်ခံ များဖြစ်ကြ သည့် အနောတ္တပ္ပနှင့် ဥဒ္ဓစ္စတို့ကို ပို၍ မာသလို၊ လုံသလို ရှိ၏။ ဟုတ်သည်။ မထင်မှတ်သော အပိုင်းမှ တိုက်စစ်ဆင်ရမည်။ ပင်နယ်တီ ဧရိယာထဲ ဘော လုံးရောက်နိုင်သလောက် ရောက်အောင်ပို့ပေးရမည်။ ဂိုးမရစေဦး ပင်နယ်တီရဖို့ အခွင့်သာ၏။ ပင်နယ်တီ မရေစေ၊ ပြစ်ဒဏ်ဘော ရမည်။ ဟုတ်၏။ ရှေ့ရောက်ရောက်နေတတ်သော ဥဒ္ဓစ္စမှ ကောင်တာ အတက် ဆင်ရမည်။ မြန်မှတော့ရမည်။ တစ်ချက်ထိ။ ဝမ်းတူး၊ တူးဝမ်း မှ ရမည်။ ဒိုင်က ခရာငုံ အကတ်ပိတ်မလုပ်ဖို့ (ရေငုံနှုတ်ပိတ်လို့ မဖတ်ကြရန်) အရေးကြီးသည်။
တစ်သင်းလုံး၏ တမ်ပိုကို ထိမ်းထားသည်။ သူ၏ ကစားကွက် မဟာဗျူဟာ (၆၂) အလွန်နာမည်ကြီးသည် ။ ကြီးသလောက်လည်း ကြောက်စရာအလွန်ကောင်းသည်။ ဘာစိလိုနာက ရှဗီနှင့် ဆင်ဆင်တူသည်ထင်၏။ အထိမ်းအသိမ်း သေသပ်သည်။ ဘောပေးမှားသည်မရှိ။ တိုက်စစ်အားလုံး သူ့ဆီက စ တတ်သည်။ သူ့ဆီက ဘောထွက်ပေါက် ငါးပေါက်ရှိသည်။ ကြောက် စရာ အကောင်းဆုံးက လောဘဆီ ချချပေးတတ်သည့် သေချာပေါက် အလုံး များတည်း။ အဓိက ဤလမ်းကြောင်းကို ပိတ်ရမည်။ သူ့ဆီက ဣဿာနှင့် မစ္ဆရိယ ဆီထွက်သွားသော ဘောလုံးများက သိပ်အန္တရယ်မရှိလှ။ ဘောပိုင်ဆိုင်မှုသာရပြီး ဂိုးသွင်းဖို့ အခွင့်အရေးသိပ်မရှိ။ သို့သော် ကိလေသာ အသင်းက ဂိုးစရလျှင် ဤနည်းဖြင့် ကစားကွက် အသာစီးယူပြီး ကစားသွားကြလိမ့်မည်။သူ၏ မဟာဗျူဟာ(၆၂) ကြောက်စရာကောင်း၏။
ထိုကြောင့်ဆို၏။ ဒိဋ္ဌိသည် ကွင်းလယ် ဗိုလ်ချုပ် ဟု။ တစ်သင်းလုံး၏ တမ်ပို (အရှိန်)ကို သူထိမ်းထားသည်။ ကိုယ်က ဦးအောင်ဂိုးသွင်းနိုင်လျှင် ဒိဋ္ဌိက ဗျူဟာ တစ်နှင့် နှစ်ကို ပိုသုံးမည်။ ကိလေသာ အသင်းက ဂိုးအရင်သွင်းလျှင် ဗျူဟာ သုံးကို ပိုလိမ့်မည်။ ဘောပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့် အချိန်ပြည့်အောင်ထိမ်း ကစားသွား လိမ့်မည်။ ခက်သည်က ဒိဋ္ဌိသည် အနီးအဝေး ကစားနိုင်၏။သူ့ အားနည်းချက်က အနည်းငယ်လေး၏။
၇။ ဒေါသ။ စွယ်စုံရ ကွင်းလယ်အဖျက်သမား
သူ့ ကစားဟန်က ကြမ်းသည်။ တိုက်စစ်ကစားသမား မှန်သော်လည်း တိုက်စစ်၊ ခံစစ် နှစ်မျိုးလုံး ကစားနိုင်သည့် ပါရမီရှင်ဟု ဆိုရမည်၊ ကစားအား ကောင်းသည်၊ သက်လုံ မကျ၊ မိနစ် ၁၂၀ အထိ တရှူးမူးဒိုး လုပ်နေနိုင်သည်။ သူ့ အားနည်း ချက်က လူချတတ်ခြင်း၊ ဘောထိမ်း မသေချာခြင်းဖြစ်သည်။ ယာယာ တိုရီနှင့် ဆင်ဆင်တူပြီး ယာယာ တိုရီလောက်တော့ ကြောက်စရာ မကောင်းလှ။ သူ့ကို စိတ်ဆိုးအောင် ဆွပြီးကစားရလျင် လူ အသာစီးရနိုင်သည်။ ဒီကောင်က ထစ်ကနဲဆို လက်ပါတတ်သည်။
၈။ မာန။ ကွင်းလယ် ဘယ်အစွန်
သူနဲ့ ဒိဋ္ဌိက (ဂယ်ရီ၊ ဖီးလစ်) နဗီးအမွှာထက်တောင် နားလည်မှု ရှိသည်၊ ဒိဋ္ဌိ က ဒေါသနဲ့ထက် သူနဲ့ တွဲဖောက်တာ များသည်။ အကောင်ထွားပြီး ကန်ချက် လည်းပျင်းသည်။ ဖရီးကစ် ဇီးကုတ်အပြင်မှရလျင် သူကန်ဖို့ များသည်။ ရော်နယ် ဒိုနဲ့ ဆင်ဆင်တူသည်။ ကံကောင်းသည်က ဝိစိကစ္ဆာ နာနေခြင်းပင်၊ ဒိဋ္ဌိ၊ မာန၊ ဝိစိကစ္ဆာ သုံးထောင်းချိုးတိုက်စစ်အောက်မှာရောက်သွားလျင် ခံနိုင်သောအသင်း သိပ်မရှိ။ ဂိုးပေရတတ်သည်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ အဓိက ကစား သမားဖြစ်ေ နခြင်းကြောင့် မောက်မာလှသလို ကြောက်စရလည်း အလွန်ကောင်းသည်။ သူ့အားနည်းချက်က တစ်ဖက်အသင်းကို အထင်သေးခြင်း ဖြစ်သည်။
၉၊ ၁၀။ ဣသာ၊ မစ္ဆရိယ၊ တွင်း တာရာရစ်
ဣသာနဲ့ မစ္ဆရိယကမှ တကယ့် အမွှာ၊ အမွှေအနှောက်အလွန်ကောင်းသည့် ကွင်းလယ်ကစားသမား အတွဲဖြစ်သည်။ အတွဲလည်း ညီသည်။ သူတို့ ဖျက်လျင် တစ်ဘက်အသင်းတိုက်စစ် ပျက်သည်သာများ၏။ ကွယ်းလယ်ဆို၍ ဂိုးမသွင်း တတ်ဘူးထင်လျင် သေဖို့သာရှိတော့သည်။ လောဘနဲ့ ဒိဋ္ဌိတို့လောက် နာမည် မကြ်ီးသော်လည်း သူတို့အတွဲ မိသွားပြီဆိုလျင် တားရဆည်းရ အလွန်ခက် သည်။ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးက နောက်တန်း ညာအစွန်ကစားသမား ကုက္ကုစ္စပါ တက်လာပြီး ဒေါသနဲ့ပါ အတွဲမိသွားခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ဒေါသ၊ ဣသာ၊ မစ္ဆရိယ၊ ကုက္ကုစ္စ တို့ကို နည်းပြတွေက ဒေါစတုတ်လို့ခေါ်ကြသည်။ ဒေါ ကွာ ဒရပ်ပယ်လို့ ဗိုလ်လိုဆိုသည်။ ခက်ချေပြီ။ မြန်မာနားလည်သော စကား မပါသေး။ လေးယောက်စု တိုက်စစ်ဟု ခေါ်ရမည်ထင်သည်။ ထူးခြားသည်က သူတို့ ဒေါစတုတ်ဗျူဟာဆင်လာပြီဆိုလျင် လောဘက ကွင်လယ်ရောက် သွားပြီး ဒေါသက တိုက်စစ်မှုး ဖြစ်သွားတတ်ခြင်းပင်။ တော်တော်လည်း တတ်နိုင်တဲ့ ကိလေသာအသင်းပါပေ။
၁၁။ လောဘ။ တိုက်စစ်မှူး
ဒိဋ္ဌိပြီးလျင် ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားဖြစ်သည်။ ဘာမှ မဟုတ် တာလေးတွေကနေ ဂိုးရအောင် လုပ်နိုင်သည်။ တစ်ကိုယ်ကောင်း ဆန်သည် ။ လောဘ၊ ဒိဌိ၊ မာနအတွဲက "လော၊ ဒိ၊ မာ" ဟု လူသိများသည်။ "လောတြိ" ဟု ချစ်စနိုးခေါ်ကြသည်။ သူတို့က အတွဲလိုက် တိုက်စစ်ဆင်လာတတ်သည်။ မက်စီ၊ အင်နီယက်စတာနဲ့ ရှဗီတို့နဲ့ ဆင်ဆင်တူမည်။ အတွဲလိုက်ကောင်းသည်ဆိုသဖြင့် လောဘကို မကပ်ဘဲထားမိလျင် သေဖို့သာ ရှိသည်။ လောဘသည် အတွဲလိုက်ဖောက်နိုင်သလို ဆိုလိုလည်း ဖောက်နိုင် သူဖြစ်သည်။ သူနဲ့ အတွဲ သိပ်မမိတာက ဒေါသသာဖြစ်သည်။ သူတို့က ကွင်းတွင်း၊ ကွင်းပြင်မှ သဟဇာတ မဖြစ်။ သို့သော် နှစ်ယောက်စလုံးက ဆိုလို ကစားနိုင်သူချည်း ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ကိလေသာအသင်းကို အနိုင်ရဖို့ဆိုလျင် လောဘနဲ့ ဒေါသကို အခြား ကစားသမားတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်မရအောင် လမ်းကြောင်းပိတ်ထားခြင်းသာ ဖြစ် မည်။ သူတို့နှစ်ယောက်က ကစားကွက် မညှိတတ်၊ သူတို့ချင်း အပေးအယူ မလုပ်တတ်။ ဒေါသက လောဘကို ချပေးမည့်အစား သူကိုယ်တိုင် ရောက်ချင် ရာရောက် အဝေးမှ ကန်သွင်းမှာ သေချာသည်။ လောဘကလည်း ဒေါသဆီပေး လိုက်လျင် ဘောပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးသည်ဟု ယူဆပြီး ပေးမှာ မဟုတ်။
အချုပ်ဆိုရသော် ကိလေသာအသင်းမှာ တိုက်စစ်နှစ်မျိုးရှိသည်။
၁။ လောတြိ တိုက်စစ်နဲ့
၂။ ဒေါစတုတ် တိုက်စစ်ဖြစ်သည်။
ယင်း တိုက်စစ်နှစ်မျိုလုံးကို ကွင်းလယ်ဗိုလ်ချုပ် ဒိဋ္ဌိက မဟာဗျူဟာ ၆၂ ဖြင်း ထိမ်းပေးထားသည်။
ကိလေသာအသင်းသည် အလွန်တောင့်တင်းသော အသင်းကြီးဖြစ်ပြီး မဆို စလောက် အားနည်းမှုသည် လောဘနဲ့ ဒေါသတို့ကြားမှာသာ ရှိနိုင်ပေသည်။ သူတိုအတွဲမိသွားလျင် ကျွန်ုပ်လည်း ဘာမှတတ်နိုင်မည်မဟုတ်။ ဇူလိုင် လဆန်းပိုင်းမှာ ဗိုလ်လုပွဲ ရှိသည်။
အဓိက ကတော့ အဝိဇ္ဇာခေါ်၊ မောဟခေါ်၊ ရောင်း ဗျူးခေါ် ဒိဋ္ဌိက အခရာ ပင်ဖြစ်ပေတော့သည်။
ဒိဋ္ဌိကိုနိုင်အောင်ထိမ်းထားနိုင်မှ ရပေမည်။ သို့မဟုတ်လျင်.........၊ ဒိဋ္ဌိက ဘယ်သူနည်း။
ကျွန်ုပ်ကစားသမား ၂၅ ယောက်ထဲမှာ ဖတ်စ် အီလဲဗင်းကို ရွေးရပေဦးမည်။
Labels: 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ, ဘောလုံး
Only in India. ၁၂ နာရီ ၇၅ မိနစ်
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 6/19/2014 - No comments
(Estadio Maracana မှ သတင်းပေးပို့သည်)
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 6/19/2014 - No comments
သမ္မတကြီးကို အားပေးနေရတာဟာ မန်ယူနဲ့ စပိန်ကို အားပေးနေရသလိုပဲ ဆိုတာ ဒီနေ့မနက်ဆိုရင် အားလုံးသိကြပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဟော်လန်က အာရှဆိုလို့သာ ရှလိုက်ရတဲ့ အာရှမျက်နှာနဲ့ တစ်စက်မှ မတူ၊ (လီကွမ်းယုစကားနဲ့) အမှိုက်ဖြူ အော်ဇီကို ကံကောင်းပြီး နိုင်လိုက်တဲ့နောက် ငရုပ်သီး(ချီလီ)ကိုနိုင်ရင် အမှိုက်ဖြူကိုတော့ အေးဆေးဆိုပြီး အိပ်ယာဝင်လိုက်တာ မနက်ရောက်တော့ ငရုပ်သီးကို နှစ်ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ ရှုံးသွားကြောင်း သိလိုက်ရပါတယ်။ သမိုင်းဝင်၊ နှစ်ပွဲ၊ ၇ ဂိုး ၁ ဂိုး၊ ရမှတ်မရှိ၊ ပထမအုပ်စုထွက် နွားရိုင်းသတ် သမားတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ၁၉ ရက် မနက်မှာ ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ လက်ရှိခြေနဲ့ဆိုရင် သိက္ခာဆယ် အမှိုက်ဖြူ အော်ဇီကိုတောင် နိုင်ဖို့ မလွယ်တော့ ပါဘူး။
မိဘပြည်သူများ သိပြီးသားမို့ အကျယ်မပြောတော့ပါဘူး။ ဒီနှစ်ကတော့ စပိန်၊ မန်ယူနဲ့ ဦးသိန်းစိန်ပရိသတ်တွေ ကံမကောင်းတဲ့ နှစ်ပါခင်ဗျား။
in သီဟနာဒ, ရွှေပြည်ကြီးအကြောင်း - on 6/18/2014 - No comments
ဘုရားရှင်လက်ထက် ဣသိဂိလိကား နာမည်ကောင်းဖြင့် ကြော်ကြားခဲ့ သည့် တောင်တန်းကြီးဖြစ်သည်။ သူ့ရင်ခွင်မှာ သစ်ပင်တို့ ထူထပ်သည်၊ သဘာ ဝ ကျောက်လိုဏ်ဂူများရှိသည်၊ အေးမြသည့် တောရိပ် တောင်ရိပ်ရှိသည်။ ဤအရာ အားလုံးကို ပေါင်းစပ်လိုက်တော့ ရဟန်းတရား ပွားများရန် အလွန်ကောင်းေ သာနေရာ ဖြစ်လေသည်။ ဣသိဂိလိမှ မွေးထုတ်ပေးလိုက်သည့် ရဟန္တာပေါင်း မည်မျှရှိလေမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့ ဉာဏ်မီသောကိစ္စ မဟုတ်ပေ။
ဣသိဂိလိထဲ ဝင်သွားသည့်ရဟန်းတော်များကို ဝင်သွားသည်ကိုသာ တွေ့ရပြီး ဘယ်ရောက်သွားသည် မသိရ။ ထို့ကြောင့် လူတို့က ယင်းတောင်ကြီးကို ရဟန်းမျိုတောင် (သို့) ဣသိဂိလိတောင်ဟု ဆိုကြလေသည်။ လက်ဝဲတော်ရံ အရှင်မဟာ မောဂ္ဂလန်မထေရ်ကြီး သဘောကျတော်မူလှသည့် နေရာ။
ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်မှာတော့ ရဟန်းမျိုတောင် မရှိ၊ ရဟန်းမျို ထောင် များသာ ရှိတော့သည်။ ယင်းထောင်များအနက် မန္တလေး နန်းတွင်းထောင်နဲ့ ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင်တို့က နာမည်ဆိုးဖြင့် နာမည်ကြီးလှသည်။ ထိုထို ဣသိဂိလိ ထဲရောက်သွားသည့် ရဟန်းတို့ကိုလည်း ဝင်သွားသည်ကိုသာ သိမြင်ရပြီး ဘယ်မှာရောက်သွားသည် မသိရတော့။ အမျိုခံလိုက်ရသည့် ရဟန်းတော်များတွင် မစိုးရိမ်ဆရာတော် ဦးကောဝိဒါဘိဝံသ အစ၊ ဦးဝီရသူအလယ်၊ ဦးဥတ္တရအဆုံး အရေအတွက် များလွန်းလှ၏။ ဝမ်းနည်းဖွယ် ကောင်းလွန်းလှပြီ။
သတ္တပဏ္ဏိလိုဏ်ကို အတုယူပြီး ဦးနုက ဆဋ္ဌပါသဏ လိုဏ်ဂူတော် တည်ဆောက်ကာ ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင်ခဲ့သည်။
ဦးနုနောက် တက်လာသည့် မင်အဆက်ဆက်ကား ဣသိဂိလိကို အတုယူပြီး ရဟန်းကောင်းတွေကို မျိုစေတော့သသည်။ သို့သာဖြစ်သည် သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုမူ သာသနာပြုမင်းအဖြစ်မှ တစ်ပြားသားမှ မလျှော့ခဲ့ကြ၊ အသောကနဲ့နှိုင်းလျင် ကျေနပ်မဆုံး ရှိတတ်ကြ၏။
ဂိဇ္ဈဂုတ်တောင်ပင် မြန်မာပြည် ရောက်လာလေဦးမည်လား။
ကွန်မင့်ရှင် မစ္စတာ ဂျွန် စမစ်သို့
in 3D ဘာသာရေး, စာဖတ်သူသို့ပြန်စာ, သီဟနာဒ - on 6/17/2014 - No comments
၂၀၀၂ ခု၊ ဧပြီ ၂၈ ရက်၊ ည ကိုးနာရီထိုးရန် ၁၀ မိနစ်အလို။
မဟာသန္တိသုခထဲမှာ တစ်ပါးမှ မကျန်တော့သည် အချိန်။ အခန်းနံပါတ် ၅၀၈ ကို တံခါးလာခေါက်သည်။
"အရှင်ဘုရားက မသွားသေးဘူးလား၊ ဓမ္မစက်နဲ့ မရရင် အာဏာစက် သုံးရမှာ ဘုရား"
"သွားမှာပါ တကာကြီး၊ ကိုးနာရီထိုးဖို့ ၁၀ မိနစ်တောင်လိုသေးတာပဲ"
"အရှင်ဘုရားနဲ့ အခြားတစ်ပါးက (ယခု နယူးဇီလန်ရောက် ဦးသီရိဓမ္မ) ဆက်နေ မယ်ဆိုရင် နေလို့ရပါတယ် ဘုရား၊ ဒါပေမဲ့ အဘ(ဦးခင်ညွန့်)ဆီနဲ့ ဦးစောမြင့်ဆီ စာရေးပြီးနေခွင့်ပြုဖို့ တောင်းခံပါ"
အိပ်လေးတစ်လုံးဆွဲရင်း ကျောင်းပေါက်ဆီ ထွက်လာခဲ့သည်။ ယင်း အရပ်ဝတ် စစ်အရာရှိတို့လည်း လိုက်ပါလာရင်း စကားပြောကြသည်။
"မလုပ်နိုင်ပါဘူး ဒကာကြီး၊ အဖေက သဘောတူမှာ မဟုတ်ဘူး"
"အရှင်ဘုရား ဒကာကြီးက ဘယ်သူလဲ"
"ဦးဇင်းပြောတာက အဖေပါ၊ ဒကာကြီးမဟုတ်ဘူး"
"အရှင်ဘုရား အဖေ ဘယ်သူလဲ"
"ဒကာကြီးကလည်း ရဟန်းအဖေပါဆို ဘုရားပေါ့"
ထိုစဉ် ကိုးနာရီထိုးသဖြင့် သုံးနှစ်ကြာသီတင်းသုံးခဲ့ရသည့် ကျောင်းတော်ရဲ့ ဂိတ်အပြင်ကို ထွက်လိုက်သည်။ သူတို့နဲ့ စကားက မပြတ်သေး။
"လျှောက်စရာရှိရင် ကျောင်းအပြင်လိုက်ခဲ့ပြီး လျှောက်ပါ ဒကာကြီးတို့၊ ထုတ်ထားတဲ့ အမိန့်က ၉ နာရီဆို ကျောင်းဝင်းထဲ ရှိမနေရဘူး၊ ဒကာကြီးတို့လည်း ဥပဒေကို မဖောက်ပါနဲ့"
မျက်နှာ အနည်းငယ်ပျက်သွားသည်(ထင်၏)။ သူတို့လည်း နောက်က လိုက်လာကြပါသည်။
"အရှင်ဘုရားက ဒီကနေ ဘယ်ကို ကြွမှာလဲ၊ ကျောင်းပိုင်ရှိသလား"
"ဘယ်ကို သွားရမယ် မသိသေးဘူး၊ ထွက်ဆိုလို့ ထွက်ရမယ်ဆိုတာပဲ သိပါ တယ်၊ ကျောင်းပိုင် မရှိပါဘူး"
"အရှင်ဘုရား ရှိမယ့်လိပ်စာကို ပေးထားခဲ့ပါ၊ တပည့်တော်တို့ ဆက်သွယ်ပါ့မယ်"
"ပေးစရာ လိပ်စာလည်း မရှိပါဘူး"
သို့ဖြင့် တစ်လခန့်အကြာ စစ်ပွဲမှာ နောက်ဆုံး ကျဆုံးခဲ့ရသည့် အသေးမွှားဆုံး စစ်သားလေးအနေနဲ့ ပီနန်ဆရာတော်ကြီးထံ ရောက်ခဲ့ရသည်။
ကံအလှည့်ပေးသဖြင့် စင်္ကာပူ၊ မြန်မာကျောင်းကြီးဆရာတော် ဦးတိလောက (ဘုန်းကြီးတိ) ၏ လမ်းညွှန် ဩဝါဒပေးမှုဖြင့် စင်္ကာပူမှာ အထင်ကရ၊ ထေရ ဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေး အဓိကဖြန့်ဖြူးရာ(ဓမ္မ စကူးလ်နဲ့ ပါဠိကောလိပ်) ကျောင်း တိုက်မှာ လက်ထောက်နေရာ ရခဲ့သည်။
ငါးနှစ်အကြာ လူကြီးဖြစ်လာခဲ့သည်၊ စင်္ကာပူ အမျိုးသားတက္ကသိုလ် (National University of Singapore) လိုနေရာမှာ ဘာဝနာနဲ့ အခြားအဆုံးအမများ သင် ကြားပေးခွင့်ရလာသည်။
နောက် နှစ်နှစ်အကြာ ယင်းတက္ကသိုလ် ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ Spiritual Adviser ဖြစ်လာခဲ့ရသည်။ ယနေ့အထိ။
အချိန်ရခိုက် မိမိတတ်နိုင်သည့် စာပေရေးသားခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ ၎င်းတို့အထဲမှ အထူးသဖြင့် လီကွမ်းယု၏ "နားဝင်မချိုသည်" နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက် အကျိုး တစ်စုံ တစ်ရာရှိသည်ဟု ယုံကြည်သည်။
မိမိမှတစ်ပါး အခြားအခြားသော မိတ်ဆွေရဟန်းများလည်း ကျောင်း အသိမ်းခံရ သည်ဆိုစေ ပီနန်ဆရာတော်ကြီး၏ ကျေးဇူးကို ရောက်ရာမှာ စွမ်းသလို သာ သနာပြရင်း ဆပ်နေကြပါသည်။ အောင်လည်း အောင်မြင်ကြပါသည်။
ထို့ကြောင့် ယနေ့အထိ မိမိ၏ဆုံးဖြတ်ချက် မှန်ဆဲဟုလည်း ယုံကြည်ပါကြောင်း
(လက်ရှိအနေအထားကြောင့် "ဦးဇင်းတို့အရွယ်က ထောင်ထဲမှာ အချိန်ကုန်ဖို့ ထက် ကမ္ဘာထဲ တိုးဝင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်" ဆိုတဲ့စကား ချန်ထားခဲ့ရပါကြောင်း)
Labels: 3D ဘာသာရေး, စာဖတ်သူသို့ပြန်စာ, သီဟနာဒ
in ဇင်ဝေသော်, နိုင်ငံရေး ဂျုတ် - on 6/17/2014 - No comments
မအားဘဲ ကစားနေရတဲ့ ပရိသတ်ကြီးခင်များ....
လောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့ "(ဦး)ဝီရသူ" ဖဘက တိုက်စစ်၊ ခံစစ်၊ ကွင်းလယ်ကစားကွက်၊ အချက်အလက်ညီညီ၊ ပညာပါပါနဲ့ "(ဦ သို့ အူ)သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ"ဖဘကို တရကြမ်း တိုက်စစ်ဆင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ် ခင်ဗျား၊
"(အူ)သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ"အသင်းရဲ့ အဓိက အားနည်းချက်က မောင်အံ့ရဲ့ ခံစစ်ဖြစ်နေပြီး ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် အလူးအလဲ ဖျက်ထုတ်နေရပါတယ်။ "မောင်အံ့ အောက်တ်" "မောင်အံ့ အောက်တ်" ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေ ကြားရသလို "သူခိုး သူခိုး" ဆိုတဲ့အသံတွေလည်း ကြားရပါတယ်။ မောင်အံ့ကလည်း နည်းပြအားကိုးနဲ့ တိုင်ချင်တဲ့ရုံးသွားတိုင် မထွက်ဘူးလုပ်နေပါတယ်။
ဒီပွဲမတိုင်မီ "ဝိဘဇ္ဈာဝါဒသစ္စာ့ဝါဒီ" ဖလားမှာ သီတဂူဆရာတော်ကြီးက ၆ ဂိုး၊ အံ့မဟန ယူနိုက်တက်အသင်းက ဂိုးမရှိနဲ့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ခြေအရ ဒီထက် ဂိုးပြတ်သင့်တယ်လို့ တက်ခေါက်သူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
ဒီပွဲတွေဟာ အလွန် အရေးကြီးပါတယ် ခင်ဗျား။
ပထမ ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ သာသနာပြု ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ သာသနာဖျက် ရန်ကုန်စီးတီးအသင်း။
ဒုတိယ ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ သစ္စာဝါဒီနဲ့ မုသာဝါဒီအသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာပါ။
တတိယ ကွာတားဖိုင်နယ်မှာတော့ ကုသိုလ်က နှုတ်ထွက်သွားလို့(သေသွားလို့) အကုသိုလ်အသင်းက တိုက်ရိုက်ဆီမီးတက်လာပြီး
စတုတ္တကွာတားဖိုင်နယ်မှာတော့ ရေငုံနှုတ်ပိတ်အသင်းနဲ့ အွန်လိုင်းယူနိုက် တက်တို့ တွေ့ကြမှာပါ။
နိဗ္ဗာန်သို့သွားရာ တစ်ကြောင်းတည်းသောလမ်း (ဖားအောက်တောရ ဆရာတော်ကြီး)
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 6/16/2014 - No comments
ဖားအောက်ဆရာတော်ကြီးတို့များ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲရဲ့အရိပ်အာဝါသလည်း မရ
မဟနရဲ့ အပယ်ခံ၊ ထုတ်ဝေခွင့် အပိတ်ပင်ခံရဘဝနဲ့ ပြည်ပမှာ ရေးသား ထုတ်ဝေတော်မူလိုက်တာဆရာအံ့ထက် နှစ်ဆကြီး၊ နှစ်ဆထူသွားပါရောလား။ ခိုးယူးထားတယ်လို့ ပြောစရာလည်း မရှိ။ ပိဋကတ်တော်နဲ့ အတိ။
စွမ်းသူကို ဝိုင်းပယ်၊ ဖားသူကို ဝိုင်းဆယ်။
ခေတ်စောလို့(အင်္ဂလိပ်ခေတ်၊ ကျွန်ခေတ်)ကံကောင်းသွားတော်မူတဲ့ လယ်တီဆရာတော်ကြီး ဘုရား။
မောင်အံ့(မဟာဝိဇ္ဇာ၊ ဘုံဘေ)ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်
in ပြုံးစိစိ - on 6/16/2014 - No comments
ဖလားဆိုလို့သာ ဖလားရတယ်နဲ့ အုပ်စု (ဂ) ပွတ်တိုက်မှု
in ဇင်ဝေသော်, ဘောလုံး - on 6/16/2014 - No comments
ကမ္ဘာ့ခွက်လုပွဲ မကြည့်ဖြစ်ပေမဲ့ နည်းနည်းတော့ ရေးဦးမှ။
ရွာက ကိုရင်ကြီးသင်ပေးလိုက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ထဲမှာ "cup" က ခွက်။ "gas" က ထည့်သည် ပါ။
ဒါနဲ့ ပုံကြည့်ပြန်တော့လည်း မြန်မာတွေ သိတဲ့ ရေဖလား၊ ရွှေဖလား၊ ငွေဖလား
မျိုးလည်း မဟုတ်ဘူး။ ရှည်ရှည်ကြီး။
ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာ့ခွက်လုပွဲကြီးလို့ဆိုရင်းလည်း ကျောင်းလုတာလောက်ပဲ သိတဲ့ လူတွေက လက်ခံမှာ မဟုတ်။
ဒီတော့ ဖလားဆိုလည်း ဖလားပေါ့။ ထားတော့ ဒါနဲ့
သတင်းစာကောက်လှန်တော့ Group C clash ဆိုတာကိုတွေ့တယ်။
သမ္မကြီးလေသံအတိုင်း ဘာသာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ အုပ်စု (ဂ) ပွတ်တိုက်မှု။ မိုက်တယ်။
ပြည်တွင်းမှာတော့ အုပ်စု (ဃ) ပွတ်တိုက်မှုဖြစ်နေတယ်။ အရှေ့တိုင်းမို့ တစ်ရက်စောတာနေမှာ။
ဦးသိန်းစိန် ဂျင်မီကာတာ ဖြစ်လာနိုင်ဦးမလား(၃)
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 6/16/2014 - No comments
ဒီမိုကရေစီ သွေးသားက နုနု
လတ်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ မဟာသန္တိသုခကိစ္စဟာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ရဲ့ နိုင်ငံရေးသိက္ခာကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှာ အကြီးအကျယ် ထိခိုက်မှုရှိနေပါပြီ။ ဒီကျောင်းကို ဘယ်သူပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အငြင်းပွားမှုကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။
၁။ ဦးအံ့မောင် သမ္မတအကြံပေး ဟုတ်၊ မဟုတ်
၂။ ဒီအချိန်မှာ ဘာသာရေးပြသနာ အဖြစ်ခံသင့်၊ မခံသင့်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ရှောင်မရတဲ့ မီဒီယာကနေ မနေ့ကအထိ သိလိုက်ရတာက ဦးအံ့မောင်က သူ့ ကိုယ်သူ သမ္မတရုံးအကြံပေးလို့ ဝန်ခံပြီး သမ္မတရုံးက ဒါကို ငြင်းဆန်တယ်။ တကယ်လို့ မဟုတ်ရင် သမ္မတအာဏာကို အလွဲသုံးစားပြုရာ ရောက်မနေဘူး လား။ မဟာသန္တိသုခကိစ္စက သမ္မတနဲ့ တိုက်ရိုက်မဆိုင်ဘူး၊ ဝင်ရောက်ဖြေ ရှင်းပေးမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာက(နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေး မတူဘူး လေဆိုပြီး) လက်ခံထားလို့ရပေမဲ့ သမ္မတအာဏာကို အလွဲသုံးစားပြုတာကတော့ သမ္မတနဲ့ မဆိုင်ဘူး ပြောလို့မရနိုင်တော့ဘူး။
အရေးယူရမယ်။ သမ္မတရုံးကထွက်လာတဲ့ ငြင်းချက်ရဲ့နောက်မှာ စစ်ဆေးအရေး ယူမယ်ဆိုတာ ပါမလာဘူး။ ပါတယ်ဆိုရင် မိမိရဲ့ မနှံ့စပ်ကြောင့်မို့ တောင်းပန် ပါတယ်။
ဒါက ဘာလဲ။ ဦးအံ့မောင်က ဘယ်သူလဲ။ သမ္မတရုံးကထွက်လာတဲ့တုန့်ပြန်မှုက အဖြေထက် မေးခွန်းပဲ ပေးခဲ့တယ်။ ဦးအံ့မောင်ဟာ နိုင်ငံတော်သမ္မတက မထိ ရဲလောက်အောင် ကြီးနေသူလား။ ဘာကြောင့်လဲ။
တစ်ကမ္ဘာလုံး ဘာသာရေးက ဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်နေချိန် ဒီမိုကရေစီသွေး သားနုနုနဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ ဘာကြောင့် ဒီလိုကိစ္စမျိုး အဖြစ်ခံရသလဲ။ သမ္မတက ဝင်မရှင်းလို့ ပြသနာရှင်းသွားပါ့မလား။ စိုးရိမ်စရာပဲ။
အခုဆို အနည်းဆုံး သုံးအုပ်စု ကွဲနေတယ်။
၁။ ဦးအံ့မောင်နဲ့ မဟန အတိုက်အခံအုပ်စု
၂။ ဦးအံ့မောင်နဲ့ မဟန အုပ်စု(အသံ မထွက်လှပေမဲ့ အချုပ်အချာအာဏာဆိုတဲ့ စကားလုံးကြီးကို သုံးလိုက်ရင် အားမသေးလှဘူး)
၃။ လူတွေ လမ်းပေါ်ရောက်လာမှာ စိုးရိမ်တဲ့အုပ်စု။
မဟာသန္တိသုခက သင်တန်းသားအသစ်တွေ ခေါ်ယူဖို့ လုပ်နေပြီ၊ အခုနေ တားမြစ်ရမယ်။ အခု မတားမြစ်လို့ သင်တန်းသားအသစ်တွေ ရောက်လာရင် ဒီထက်ရှင်းရခက်မယ်။ ဒီလိုလား။
တကယ်လို့ အကျိုးအကြောင်းညီညီနဲ့ ပီနန်ဆရာတော်ကြီး မပိုင်ဘူးဆိုတာ ခိုင်မာရင် နောက် ၅ နှစ်၊ ၁၀ နှစ်ကြာပြီး နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မ်မှ ဖြေရှင်းရင်ကော မရနိုင်ဘူးလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူအများစုကတော့ လမ်းပေါ်ကို ရဟန်းတွေ၊ လူတွေတက်လာမှာ၊ မဖြစ်လို့ လမ်းပေါ်တက်လိုက်ရမှာကို ကြောက်နေကြတယ်။ လမ်းပေါ်လူတွေတက်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ အကြမ်းမဖက်နည်းလား၊ ဓာတ်ပြားဟောင်း ကျည်ဆန်လား၊ မျက်ရည်ယို ဗုံးလား။
အရေးအခင်းဖြစ်တဲ့အကြိမ် ထိုင်းလောက်မများပေမဲ့ တကယ်ဖြစ်ရင် ပမာဏက ထိုင်းထက်အများကြီး ပိုကြီးနေတတ်တယ်။
မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ အချုပ်အချာအာဏာဆိုတဲ့ စကားလုံးကြီးကို ကိုင်ပြီး အစိုးရက လုပ်မှာပဲ(လုပ်လည်းလုပ်ရမှာပဲ)။ ဒီခေတ်မှာ နိုင်ငံရေးအတွက် အသေခံရဲသူထက် ဘာသာရေးအတွက် အသေခံရဲသူ ပိုများတယ်လို့ ကမ္ဘာက သက်သေပြနေပါတယ်။ ဒီလို မဖြစ်အောင် မတားမြစ်နိုင်ဘူးလား။
အနည်းဆုံး ဦးအံ့မောင်ကို(သူ့ရှေ့က ဆိုင်းဘုတ်ကြီးမမှန်ဘူး ဆိုရင်) သမ္မတ အာဏာ အလွဲသုံးစားမှုတပ်ပြီး တရားစွဲလိုက်၊ စံပြ အပြစ်ပေးလိုက်။ လူထု ရာနှုန်းပြည့် သာဓုခေါ်မယ့် ကိစ္စ။ သမ္မတအပေါ်လည်း ယုံကြည်မှု ပိုလာမယ်။ အစိုရအကြံပေး အဖွဲ့လည်း အနည်းဆုံး စုန်းပြူးတစ်ယောက် ရှင်းသွားမယ်။
ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းကို ဘာသာရေးလက်ထဲ လွှဲပေးလိုက်။
ဒီလိုမဟုတ်ရင် ပြည်တွင်းမှာရော ပြည်ပမှာပါ နိုင်ငံရေးသိက္ခာ ဆက်ကျနေ လိမ့်မယ်။
ဒီလောက်အထိ ရေးမှတော့ ဒါဟာ စစ်အစိုးရက အာဏာပြန်သိမ်းချင် လို့ ထောက်ခြောက်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့စကားကို မယုံကြည်လို့ပေါ့။
မဟာသန္တိသုခ ဘယ်လောက်ကြီးကြီး နိုင်ငံတော်နဲ့ ယှဉ်ရင် ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းမျှသာပါ။
ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းမျှသာလို့ဆိုပေမဲ့ ဒီကျောင်းရဲ့ ကွန်ယက်နဲ့ ဂယက်က အကြီးကြီး။
ဒီမိုကရေစီ အစိုးရသက်တန်းက နုနု
မောင်အံ့(မဟာဝိဇ္ဇာ၊ ဘုံဘေ)ရဲ့ ကျမ်းစာကို ခြေရာခံပြခြင်း
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 6/15/2014 - No comments
မောင်အံ့(မဟာဝိဇ္ဇာ၊ ဘုံဘေ)ဟာ "သာသနာတော် ၂၅၀၀ ခရီး" နဲ့ စာပေနယ်မှာ လူသိလာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူ့စာအုပ်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်၊ ကျောရိုးနဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ အထက်ဖော်ပြပါ မူရင်းစာအုပ်နဲ့ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် တိုက်ဆိုင်နေ ပါတယ်။
ဒီမူရင်းစာအုပ်ကို ကျမ်းကိုးစာရင်းအနေနဲ့တော့ နံပါတ် ၆ မှာ ပေးထားတာ တွေ့ ရပါတယ်။ အမှန်တော့ ဒီစာအုပ်ဟာ ကျမ်းကိုးထက် ကျမ်းရင်းဖြစ်သင့်ပါတယ်။
သူပိုင် မာတိကာအချို့ကို ထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက် လုံးလုံးလျာလျား ခိုယူးခြင်း (ပိုင်းရေစီ)ပြောလို့တော့ မရပါ။
အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်နိုင်တဲ့ ရဟန်းတော် အချို့ရှိပေမဲ့ မြန်မာပြည်အတွက် အကျိုးများ တာကြောင့် ဒီစာအုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထောက်ပြဝေဖန်မှုမျိုး မလုပ်ခဲ့ကြပါ။
ဒါပေမဲ့ အထက်ပါစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ အမှာစကား မထားခဲ့ခြင်းကြောင့် သူရဲ့ စာပေသစ္စာကတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိနေပါတယ်။
မာတိကာကို ပုံများမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အသွင်ခွဲလိုက်ပေမဲ့ မူရင်းကြောရိုး ပျောက်မသွားခဲ့ပါ။
အုတ်ဂူတွေ မရှိပေမဲ့ စာအုပ်တွေ ရှိနေစေရပါမယ် အဖေနဲ...
RFA သတင်းမှန်ရင်တော့ ဦးသိန်းစိန်က လူထုမေတ္တာ ရဦးမှာ...
ရဟန်းအသွင်နဲ့ ကြည်ညိုခွင့် မရလိုက်ပေမဲ့ လူတစ်ယောက်...
သရေကျသွားတဲ့ အမှန်တရား(သို့) ဦးအံ့မောင် ကယ်တင်ရေး ...
ကိလေသာအသင်းနှင့် ဘောလုံးကန်ခြင်း(ဖြည့်စွက် တင်ပြ၊ ...
ခေတ်သစ် ဣသိဂိလိတောင်တန်းကြီးများ (ဣသိ ရသေ့ရဟန်း။ ဂ...
နိဗ္ဗာန်သို့သွားရာ တစ်ကြောင်းတည်းသောလမ်း (ဖားအောက်ေ...
မောင်အံ့(မဟာဝိဇ္ဇာ၊ ဘုံဘေ)ရဲ့ ကျမ်းစာကို ခြေရာခံပြ...
အဖေနေ့ - ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့ အဝှာနိုင်ငံ(သို့) ဦးသိ...
ဦးသိန်းစိန် ဂျင်မီကာတာ ဖြစ်လာနိုင်ဦးမလား(၁)
တစ်ခုခုဝင်ပြောပေးပါ စင်္ကာပူက မစ္စတာအမ်ဘာဇဒါ
ဘာသာသုံးမျိုးစလုံး အသုံးပြုမယ့် ဘာသာရေးအဆောက်အဦး
ပိုကြီးလာတဲ့ တရုတ်နဲ့ သူ့ရဲ့ ဘောဂသဟာယ ပိုင်နက်
တစ် နှစ် သုံး
အခုဆိုအခုပညာရေး ( The Pressure Cooker)